I-WiFox, usetyenziso olulawula sonke isikhululo seenqwelomoya i-WiFis | IPhone iindaba
I-WiFox, usetyenziso lokulawula yonke i-WiFis yesikhululo seenqwelomoya
UCarlos Sanchez | | Iapps zokusebenza, Ezahlukeneyo
Enye yezona zinto zisikhathaza kakhulu xa sisiya kwamanye amazwe kungenzeka ukuba uqhagamshele kwi-Intanethi nge-WiFi, kwaye nesikhululo seenqwelomoya ngasinye sinaso uthungelwano kunye neendawo zokuphumla okanye ngasese apho unxibelelwano, kodwa azisoloko zikhululekile okanye zibonelela ngokulula kwiiphasiwedi. Nge-WiFox, le ngxaki iphelile ngenxa yokusebenzisana kwabasebenzisi kunye neprojekthi yebhongo ka-Anil Polat.
1 Lonke ihlabathi
2 Ukuthetha malunga neapp
I-WiFox yiprojekthi ekufuneka isiwe kwi-iPhone IFoxnoMad, eyimvelaphi yayo yonke into. Eli qonga yindawo yogcino lwedatha apho abasebenzisi abavela kwihlabathi liphela bathumela khona ipassword yenethiwekhi yeWiFi kuzo zonke izikhululo zeenqwelo moya, ezenziwa nguAnil. Phakathi kwamagama agqithisiweyo sinokufumana ezo zonxibelelwano zeendawo ze-VIP, ezenza umdla kakhulu ukuyisebenzisa xa singenakho ukufikelela kwidatha okanye ukuzulazula kubangelwa.
UPolat uqinisekisa ukuba iprojekthi yeFoxnoMad okwangoku idlula kwi-33% yokugubungela Ukuthetha emhlabeni jikelele ngezikhululo zeenqwelo moya, umzobo ophuculweyo enkosi yemihla ngemihla ngokusebenzisana kwabasebenzisi. Ngokucacileyo, izikhululo zeenqwelomoya ezinkulu zinona nethiwekhi zikhoyo, kodwa ukugubungela kuyamangalisa ukuba, emva kwayo yonke loo nto, ibe yinto yokusebenzisana.
Ukuthetha malunga neapp
I-WiFox sisixhobo esilula, esinefayile ye- Uyilo olucace gca apho iinkcukacha zingakhathalelwanga, kodwa kwelinye icala ziya kusinika ngexesha elifutshane kakhulu into esiyifunayo: ukufikelela kwinethiwekhi. Isinika imephu yehlabathi enezixhobo zeenqwelo moya ezigutyungelweyo, ngelixa uluhlu olusemacaleni sinokufikelela kuthungelwano olwahlukeneyo, sikwazi ukukhangela kunye nokuhluza ukungcamla. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-WiFox iyasivumela ukuba sisebenzisane ukusuka kwi-app ngokwayo, into ekufuneka siyenzile ngalo lonke ixesha sifikelela kwi-WiFi kwisikhululo seenqwelomoya ukugcina umbono wayo.
Zininzi izinto ekufuneka ziphuculwe, ukusuka kuyilo (kuyo yonke iapp) ukuya kuthi ga ukubeka uthungelwano okanye izikhululo zeenqwelo moya njengezintandokazi, kodwa xa ingekho enye indlela ebhetele esinokuthi siqhubeke ngayo. Kwaye nangona kuyinyani ukuba indleko yeapps ayihambelani nobuhle bayo, ewe, inethiwekhi yokuqala evaliweyo esivumela ukuba sinxibelelane sele sizenzile ii-euro ezimbini ekufuneka sizibhatalele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-WiFox, usetyenziso lokulawula yonke i-WiFis yesikhululo seenqwelomoya
I-Apple isungule indawo entsha ekhuthaza iindaba zeMiyalezo kwi-iOS 10
I-Android Wear 2.0 ilibazisa ukufika kwayo kude kube lonyaka olandelayo